माअाेवादी विरूद्व निरन्तर परिचालित पाईलट के भन्छन ? | mulkhabar.com
माअाेवादी विरूद्व निरन्तर परिचालित पाईलट के भन्छन ?
January 6, 2019 | 9:18 am 117 Hits
काठमाडौं, २२ पुस – माअाेवादी जनयुद्धका कारण नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएकाे कुरा कतै छिप्न सक्दैन । माअाेवादी जनयुद्ध नेपालकाे ईतिहासमा सबैभन्दा लामाे र संगठीत शशस्त्र विद्राेह थियाे जसले हिमाल पहाड तराईलाई एकैपटक तरंगित र प्रभावित पारेकाे थियाे । गाउँदेखि शहरसम्म एकनासले अाक्रमण र प्रति अाक्रमणले १० वर्ष गुन्जयमान भयाे । त्याे युद्वमा १७ हजार बढिले ज्यान गुमाए । प्रहरी र सेना परिचालन गरि दबाउने क्रममा हेलिकप्टर पनि प्रयाेग भयाे । त्यही हेलिकप्टर चलाउने एक पाइलटकाे बयान अन्नपूर्ण पाेष्टमा छापिएको छ । क्याप्टेन रामेश्वर थापाले लेखेका पुस्तक “बादलमाथी उड्दा”मा यस्ताे छ –
हिजो साँझदेखि सुरु भएको दोहोरो भिडन्त अझै रोकिएको छैन। माओवादीतर्फ धेरै हताहत भएको अनुमान छ। संख्या भने यकिन भइसकेको छैन’, टेलिफोनमा हतास, उदास र बेचैन आवाज सुनियो।
‘हँ, के रे !’ भन्न नपाउँदै त्यो टेलिफोन एकसासमै बोल्यो, ‘क्याप्टेन सा’ब ! खारामा माओवादीले ब्यारेक कब्जा गर्ने भए, तुरुन्त थप सैन्य जनशक्ति लिएर उद्धारमा जानुपर्ने भयो !’
२०६१ चैत २६ गते एकाबिहानै तारन्तार बजेको टेलिफोनको घण्टीले मेरो निद्रामात्रै होइन, चैन पनि भंग गरिदियो। काठमाडौं, सिनामंगलस्थित घरमै थिएँ, म।
शाही नेपाली सेनाको ११ नम्बर बाहिनी, फ्लाइट अपरेसन युनिटका प्रमुख सेनानी दीपक कार्की टेलिफोनमा भन्दै थिए, ‘घाइतेहरूको उद्धार, थप सैन्यशक्ति र एम्युनिसन (हतियार, गोलीगठ्ठालगायत बन्दोबस्तीका सामग्री) को माग भइराखेको छ। तुरुन्त जानुपर्ने भयो।’
रूसमा निर्मित एमआई–१७ हेलिकप्टरको प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) पाइलटका रूपमा म नेपाली सेनाका लागि काम गर्न पुगेको थिएँ। सरकारले माओवादी ‘जनयुद्ध’ नियन्त्रण र निस्तेज गर्न संकटकालको घोषणामार्फत सेना परिचालन गरेपछि विज्ञ पाइलटका हैसियतले सेनाको हवाई बाहिनीसँग जोडिएको थिएँ म।
सेनाका पाइलटहरूलाई तालिम दिने, सैनिक ब्यारेकहरूमा सैन्यशक्ति र एम्युनिसन ओसार्ने, भिडन्तस्थलबाट घाइते सेना÷प्रहरीको उद्धार गर्ने, मृतकहरू ओसार्नेलगायतका काममा सघाउन भनेर मलाई ‘नियुक्त’ गरिएको थियो।
त्यसअघि ‘जनयुद्ध’विरुद्ध सरकारले प्रहरीलाई मात्रै अघि सार्दा पनि म निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर उडाएर त्यस्ता काम गर्थें। सेना परिचालन भएपछि एघार बाहिनीका बिग्रेडियर गुञ्जमान लामा, पाइलट मदन केसीलगायतले बेलाबखत सेनाका लागि पनि हेलिकप्टर उडाउन आग्रह गरिरहन्थे।
सेना परिचालन भएपछि प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाको विशेष आग्रहमा २०५८ मंसिरपछि सेनाकै हेलिकप्टर उडाउन थालेको थिएँ।
लगातारको उडानका कारण थकित भई केही दिनदेखि काठमाडौंमै आराम गरिरहेको थिएँ। उडान नियमित हुँदाका समयमा प्रायःजसो नेपालगन्ज वा पोखरामा मेरो मुकाम हुने गर्थ्यो।
फ्लाइट अपरेसन युनिटका प्रमुख सेनानी दीपक कार्कीको टेलिफोनपछि म तत्कालै उद्धारमा जानका निम्ति रुकुमको खारातर्फ उड्न तयार भएँ।
सेनाको एउटा आरएन–३७ हेलिकप्टरको मेन गेयर बक्स ‘ओभरहउल’ गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले मर्मत–सम्भारका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘ग्राउन्डेड’ थियो। साधारणतया, मेन गेयर बक्सको आयु दुई हजार उडान घण्टा हुन्छ। तोकिएको घण्टा उडान सकेपछि मेन गेयर बक्स ‘ओभरहउल’ गर्नुपर्छ। त्यसै क्रममा उक्त हेलिकप्टर ‘ग्राउन्डेड’ थियो।
सामान्य अवस्थामा ‘ग्राउन्डेड’ हेलिकप्टर उडाउन मिल्दैन। आपत्कालीन वा विशेष अवस्थामा विज्ञहरूको अनुमतिपछि भने निश्चित घण्टा उडाउन अल्पकालीन निर्णय लिन सकिन्छ।
खारामाथि आक्रमण भएको दोस्रो दिन बिहान त्यस्तै विशेष अवस्था निम्तियो। थप सैन्यशक्ति लिएर उद्धारका लागि जानुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि हवाई बाहिनीपति गुञ्जमान लामा, सोही बाहिनीका इन्जिनियर महासेनानी सन्तोष कार्की र ‘इन्सट्रक्टर पाइलट’ म गरी तीन जनाको समिति गठन भयो र उक्त समितिले बढीमा १० घण्टा उडाउन सकिने सिफारिस गर्‍यो। त्यसपछि ‘ग्राउन्डेड’ गरिएको सो हेलिकप्टर लिएर म उडेँ। साथमा थिए, को–पाइलट मेजर किरण थापा, फ्लाइट इन्जिनियर हीरालाल महर्जनसहितको प्राविधिक टोली।
काठमाडौंबाट महावीर गणका ३२ रेन्जर फोर्स र केही एम्युनिसन राखेर उड्दा बिहानको त्यस्तै ७ बजेको हुँदो हो। २१ जना क्षमताको उक्त जहाजमा ३२ जना र एम्युनिसन लोड गरेर हामी सोझै भैरहवा गयौं। त्यहाँ पनि थप केही रेन्जर र हातहतियार राख्यौं। त्यसपछि उडेका हामीले नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिम पृतनामा अवतरण गर्‍यौं।
खारा आक्रमणको रनाहाले नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिम पृतनालाई एक प्रकारको सन्नाटाले छोपेको थियो। यस्तो लाग्थ्यो, त्यहाँ हावासमेत बहनबाट टक्क रोकिएको छ। मौनता यस्तो छ, अफिसमा तारन्तार बजिरहेका टेलिफोनका घण्टीहरू चर्को माइकमा बजाइएका धुनजस्ता सुनिन्छन्। सैनिक अधिकारीहरूका अनुहारमा तनाव र निराशाका रेखाहरू प्रस्टै देख्न सकिन्छ। पृतनापति दीपकविक्रम राणा बिहानै सेनाको अर्को हेलिकप्टरबाट मुसिकोट उडिसकेका रहेछन्। त्यसैले पृतनामा उनीसित भेट हुन सकेन।
मुसिकोट एयरपोर्टमा अवतरण गरिसकेपछि दिउँसो सेनाकै सेटमार्फत उनीसित मेरो कुराकानी हुन सक्यो। उनी निकै हतास र निराशाको मनोभावमा थिए। उनले सेटबाटै भनेका थिए, ‘अब तपार्इंकै हातमा छ क्याप्टेन सा’ब, ‘ओभर रन’ हुनबाट बचाउनुस्।’
पृतनापति राणासँग कुराकानी हुनुअघि नेपालगन्ज छँदै गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहसँग पनि मेरो टेलिफोन संवाद भएको थियो। धेरै क्षति भएको अनुमान गर्दै उनीहरू छिटोभन्दा छिटो सुरक्षाकर्मीको उद्धार गर्न जोड दिइरहेका थिए। यी सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले राखेको चासोबाट छनक पाइन्थ्यो, सरकारले खारा भिडन्तलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ।
कतिसम्म सुनिएको थियो भने चैत २६ गते बिहान राजा ज्ञानेन्द्रसमेत प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई ‘खारामा सेनाले जसरी पनि जित्नुपर्छ, सेना के गरिराखेको छ ? ’ भनी कड्किएका थिए रे !
आक्रमणको मुख्य योजनाकार ‘जनमुक्ति सेना’का सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् थिए भने आक्रमणको मुख्य कमान्ड ‘मध्य डिभिजन प्रमुख’ नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ र ‘पश्चिम डिभिजन प्रमुख’ जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले गरेका थिए। पुन अहिले दोस्रोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका उपराष्ट्रपति बनेका छन्। संघीय संसद्का सांसद शर्मा भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री थिए। त्यसअघि ऊर्जामन्त्री भएका शर्माले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसकेका छन्।
माओवादीले ‘जनयुद्ध’कालमा आफ्नो छुट्टै सैन्य संरचना निर्माण गरेको थियो। सेनाले जस्तै ‘जनमुक्ति सेना’लाई मिलिसियादेखि डिभिजनस्तरसम्मको सांगठनिक संरचनामा परिचालन गरेको थियो। उसको दाबीअनुसार पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन डिभिजनको सैन्य संरचना थियो। त्यही तीनमध्ये दुई डिभिजनको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत गरी सेनाको खारास्थित सुरक्षा बेसक्याम्पमा आक्रमण भएको थियो, चैत २५ मा।
चैत २५ गते साँझ नपर्दै रुकुमको खारामा माओवादी छापामार र सेनाबीच भिडन्त सुरु भयो। माओवादीले खारा आक्रमणको अति गोप्य तयारी गरेको रहेछ, जसको भरपर्दो सूचना सेनासामु ढिलोगरी त्यसै दिन साँझपख मात्रै आइपुग्यो।
भिडन्तको दिन खारा सुरक्षा बेसक्याम्पमा खटिएका सेनाका एक अधिकारीले आक्रमणको वृत्तान्त यसरी सुनाएका थिए, ‘हामीले तीन दिन पहिले नै आक्रमणको सूचना पाएका थियौं र तयारी भइरहेको पनि बुझिन्थ्यो तर कहाँ र कति बेला गर्दै छन् भन्ने यकिन जानकारी थिएन। २५ गते दिउँसो स्थानीय सूचनास्रोतबाट बेलुका आक्रमण गर्दै छन् भन्ने बुझेपछि हामी एलर्ट बस्यौं र साँझपख गस्तीमा पनि निस्कियौं।’
‘गस्तीमा निस्किएको सेनाको टुकडीले खारातर्फ बढिरहेको माओवादी समूहलाई लामो दूरीका हतियारले हमला गरेपछि साँझदेखि नै भिडन्त सुरु भयो। माओवादी छापामारहरू खुम्चेटी डाँडा र गिद्धेडाँडाबाट लामो दूरीका हतियारबाट फायर खोल्दै अघि बढेको थिए। मुसिकोट गुल्मबाट खारातिर सहयोगका लागि ओर्लेको सुरक्षा फौज ठाउँठाउँमा राखिएका एम्बुसका कारण अघि बढ्न सकेन’, सेनाका ती अधिकारीले थपे।
जसै दिनको उज्यालोलाई अँध्यारोले निल्दै थियो, आक्रमणको पारो पनि त्यति नै उक्लँदो थियो। चारैतिरबाट माओवादी छापामारले खारा बेसक्याम्पलाई घेर्दै, विस्फोट गराउँदै अघि बढे। गोली र बम विस्फोटका आवाज अनि कोलाहल र चीत्कारले खारा रातभर रणभूमिमा परिणत भयो। छापामारले ८१ मोर्टार, जीपीएमजी, २ इन्च मोर्टारलगायत लामो दूरीका हतियारसमेत प्रयोग गरेका थिए। घाइतेकोे उद्धार गरेर फर्कंदा रातभर लडेका सैनिकहरू बताउँथे, ‘राति १० बजेपछि सेना र माओवादीबीच ‘क्लोज ब्याटल’ भएको थियो। माओवादी क्याम्पको एक नम्बर गेटबाटै ट्रेन्च खनेर भित्र आउन खोज्थे। हामी फायर खोलेर त्यहीं रोक्थ्यौं। रातभर प्रयास गर्दा पनि माओवादी ब्यारेकका तार काटेर भित्र छिर्न सकेनन्।’
सुरक्षा बेसक्याम्पमा सेना नेतृत्वको युनिफाइड कमान्डमा रहेका प्रहरीहरू १८ घण्टासम्म लगातार लडिरहेको ती घाइते सैनिकहरूको अवस्थाबाट थाहा हुन्थ्यो। राति १२ बजेपछि पहिलोपटक र बिहान ३ बजेतिर दोस्रोपटक खाराको आकाशमा नाइटभिजन हेलिकप्टर पुग्यो। ती भन्थे, ‘नाइटभिजनले तोराबोरा हानेर फर्केपछि गोली हानाहानको क्रम केही मत्थर भयो तर रोकिएन। बिहान उज्यालो हुँदै गर्दा पनि दोहोरो हानाहान जारी थियो।’
अंगे्रजविरुद्ध नालापानी युद्धमा बलभद्र कुँवरले अपनाएको रणनीति माओवादीले प्रयोग गरिसकेको थियो। खारा क्याम्पभित्र जाने मरु गाविसबाट ल्याइएको मुहानमा अवरोध गरेर १८ घण्टादेखि पानीको आपूर्ति बन्द गरिदिएको खबर बिहानैदेखि फैलिइसकेको थियो। रातभर लडेको सुरक्षा फौजलाई खाना, पानी, हतियार, गोलीगठ्ठा र थप सैन्यशक्तिको सहायता छिटो पुर्‍याउनु जरुरी थियो तथा घाइतेको उद्धार गर्नु अझै ठूलो मानवीय सहयोग थियो। त्यसकारण पनि ममा दबाब बढेको थियो।